Soo-saareyaasha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka N95-ka N95 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Tianli
1. Dharka 'meltblown' wuxuu u adeegsadaa polypropylene sida sheyga ugu weyn ee ceyriinka ah, iyo dhexroorkiisa fiber wuxuu gaari karaa 0.5-10 microns. Dharka 'meltblown' wuxuu leeyahay isku-hawo wanaagsan oo hawada ah waana maaskaro maaddada wanaagsan.
2. Waxaa laga sameeyay iskumar badan, kuwa aan xasaasiyad lahayn, waxyaabo aan dhiirin.
3. Ku hagaaji xargaha faashadda iyo barkinta leh xumbo xumbo leh si ay ula jaan qaadaan muuqaallada wejiga kala duwan oo leh silsilad raaxo leh.
4. Maaskaro la tuuri karo, fayadhowr iyo ku habboon in la isticmaalo.
Q1: Ma haysataa maaskaro wajiga ku jirta?
J: Waan ka xunahay, malaha maaskaro ku jirta saakay hadda. Warshaddayada waxaa loo habeeyay soosaarista amarradayada ka yimaada macaamiisheena adduunka oo dhan, maaskaro ayaa loo habeeyey si loogu raro macaamiisha la amray.
Q2: Ma sameyn karaa amar waji waji waji waji ah?
A: Haa, waad samayn kartaa. Warshadeenna ayaa ka mid ah soo-saareyaasha loo xushay inay ka caawiyaan soo-saarista maaskaro dawladeed, markaa wax soo-saarradeena weligeed ma joogsan illaa iyo goorma.
Q3: Ma haysaa wax shahaadooyin ah?
A: Waxaan helnay CE, FDA, iyo liisamo qaarkood oo loogu talagalay suuqa gudaha.
Hore: 2 Maska Maska
Xiga: Maaskaro FF3 ah